Kooxda Jwxo-shiil iyo Safaarada Itobiya oo kulan uga bilowday Nairobi – Rasaasa News
Mar 13, 2010 Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Kenya, ONLF
Nairobi – [rasaas, Kenya], Warar naga soo gaadhay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxay sheegayaan in uu socdo dhaqdhaqaaq heshiis hor dhac ah oo la filayo in uu dhex maro kooxda Jwxo-shiil iyo xukuumada Itobiya.
Heshiiskan oo la filayo in uu ka dhaco Nairobi maalmaha fooda inagu soo haya, ayaa ah mid xaalmastuur ah, waxaana ka dilaal ah [broker], sida ay wararku sheegayaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Kenya oo Somali ah, oo kala ah Faarax Macalin [Faarax Dawaare] iyo Maxamed Colow.
Dhinaca Itobiya waxaa heshiiska wakiil uga ah Safiirka Itobiya u fadhiya dalka Kenya oo isagu idam ka haysta Ra,iisal Wasaaraha Ethiopia, oo baryahan ku sugnaa Nairobi, isagu ka qayb galayay shirka ururka IGAD uga socday Nairobi, oo uu xiligan madax ka yahay.
Kooxda Jwxo-shiil, waxaa heshiiska la filayo in uu dhaco uga wakiil ah dambiile Maxamed Ismacil Cumar [qaaxo], oo ah ku xigeenka Jwxo-shiil, oo isagu ku sugan magaalada Nairobi. Waxaa kale oo heshiiska goob joog ka ahaan doona Riyaale Xaamud, Faysal Daahir iyo Cali dheere [cadhoole] oo labaduba ka tirsan kooxda Jwxo-shiil.
Waxaan wali cadayn in Jwxo-shiil, oo in badan doonayey in uu heshiis la galo xukuumada Itobiya, haatana ku go,odoonsan dalka Eritrea, oo ay col yihiin Itobiya in uu ka mid yahay heshiiskan iyo in kale, madaama uusan tasaruf lahayn.
Mr. Qaaxo, ayaa mudo labo todobaad ah joogay dalka Canada isaga oo aan la kulmin, cidna marka laga reebo Axmed Cabdi Xukun oo hore uga tirsanaan jiray ururka ONLF, kana tagay sanadkii 1994. Waxaa kale oo la sheegay in uu la kulmay safiirka Itobiya, kulankaas oo ay fududeeyeen laba nin oo dawlad degaanka u shaqeeya.
Wali lama ogga waxa uu heshiisku ku saabsan yahay iyo waxa lagu heshiin doono, waxaanse qarsoodi ahayn in baryahan uu socday dhaqdhaqaayo xubno kooxda Jwxo-shiil ah kula kulmayeen wakiilada Itobiya ee dibadaha.
Waxaa kale oo aan la ogayn in garabka ONLF, ee uu hogaamiyo Eng. Salaxudin Cabdiraxmaan, ay ku lug lee yihiin heshiiskan iyo in kale.